I-Vinpocetine （42971-09-5） Ifektri yomhlinzeki womkhiqizi
IVinpocetine powder yikhemikhali elenziwe ngabantu elifana nento etholakala esitshalweni se-periwinkle iVinca encane. Abantu bayisebenzisa njengomuthi. Abantu basebenzisa i-vinpocetine ukwenza ngcono inkumbulo namakhono okucabanga, ukukhulisa amandla, ukunciphisa umzimba, nezinye izimo eziningi, kepha abukho ubufakazi obuhle besayensi bokusekela lokhu kusetshenziswa.
I-Vinpocetine powder 42971-09-5 Ulwazi oluyisisekelo
Igama lamakhemikhali umagaba
omqondofana I-AY-27255, iCavinton, i-Eburnamenine-14-carboxylic acid, i-Ethyl Apovincaminate, i-Ethylapovincaminoate, i-Ethyl Ester, i-RGH-4405, i-TCV-3b, i-Vinpocetin, i-Vinpocetina, i-Vinpocétine.
Formula Yamamolekhula C22H26N2O2
isisindo Yamamolekhula I-350.5 g / mol
I-Melting Point /
InChI Key I-DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Ukuphila okungaphelele I-2 kumahora we-4
Isicelo IVinpocetine isetshenziselwa ukuthuthukisa inkumbulo futhi inyuse imetabolism yobuchopho. Ibuye yasetshenziselwa ukulimala kwe-ischemia nokuphindisela, futhi kubhekwa njenge-ejenti yokuvikela ukungasebenzi. Kodwa-ke, kunezifundo ezimbalwa zomtholampilo eziqinile zokuxhasa ukusetshenziswa kwe-vinpocetine ku-stroke, ukuwohloka komqondo, noma ezinye izifo ze-CNS.
I-Vinpocetine powder 42971-09-5 Incazelo Ejwayelekile
I-Vinpocetine powder iyinhlanganisela yokwenziwa etholakala ku-vincamine, into etholakala ngokwemvelo emaqabungeni esitshalo se-periwinkle esincane (i-Vinca minor). IVinpocetine yathuthukiswa ngasekupheleni kweminyaka yama-1960 futhi itholakala njengomuthi kadokotela eYurophu naseJapan ngaphansi kwamagama ezimpawu uCavinton, Cavinton Forte, Intelectol, nabanye.
IVinpocetine isetshenziselwa ukuthuthukisa inkumbulo futhi inyuse imetabolism yobuchopho. Ibuye yasetshenziselwa ukulimala kwe-ischemia nokuphindisela, futhi kubhekwa njenge-ejenti yokuvikela ukungasebenzi. Kodwa-ke, kunezifundo ezimbalwa zomtholampilo eziqinile zokuxhasa ukusetshenziswa kwe-vinpocetine ku-stroke, ukuwohloka komqondo, noma ezinye izifo ze-CNS.
I-Vinpocetine powder 42971-09-5 Umlando
IVinpocetine yahlanganiswa okokuqala ngasekupheleni kweminyaka yama-1960 isuka e-vincamine futhi isidayiswe ngaphansi kwamagama ezentengiselwano, njengeCavinton ne-Intelectol, kusukela ngeminyaka yama-1970s. IVinpocetine ngokuyinhloko ikhuthazwa ukuthi isetshenziselwe ukuphazamiseka kobuchopho kwemisipha, kuyilapho i-V. Minor inezinto eziningi okushiwo ngazo, ukusetshenziswa kwendabuko kufaka phakathi i-laxative, antilactaogogue, ne-emmenagogue.
I-Vinpocetine powder 42971-09-5 Mukuphawula Of Action
Izindlela ze-vinpocetine powder ziningi. Kubukeka sengathi kusebenzisana neziteshi eziningana ze-ion (i-sodium, i-potassium ne-calcium) ngenkathi kuthanda ukuholela emiphumeleni ecindezelayo ekukhishweni kwe-neurotransmitter nasekuvikeleni i-neuroprotection lapho i-dopamine noma i-glutamate icindezelwa (lokhu okubili, uma kukhuthazwa ngokungadingekile ubuthi, kungadala ukulimala kwe-oxidative). Iphinde isebenzisane nama-alpha adrenergic receptors kanye ne-TPSO receptor, kanti ngenkathi inzuzo ngqo yalokhu kuhlangana kwe-receptor kungacaci ukuthi kungenzeka ukuthi ifanelekile ngoba yenzeka ezingxenyeni ezifanayo ezenziwa ukusebenzisana kwesiteshi se-ion.
IVinpocetine nayo iyi-PDE1 inhibitor, okuyindlela esebenza ngayo ekuthuthukiseni inhliziyo nasekuqapheliseni ukuqonda. Ngeshwa, lokhu kuvinjelwa kwenzeka ngomthamo omkhulu ngokwanele futhi kungahle kungasebenzi kumithamo ejwayelekile yokwengeza ye-vinpocetine.
Ngokufana ne-PDE1, amandla we-antidopaminergic we-vinpocetine kanye nokuvinjelwa okuqondile kwama-glutaminergic receptors zombili zibonakala zenzeka ezindaweni eziphakeme kakhulu ku-vitro futhi kungenzeka zingahambelani nokwengezwa okujwayelekile.
I-Vinpocetine powder 42971-09-5 Isicelo
Thuthukisa izimpawu zesifo i-Alzheimer's
IVinpocetine yaqala ukuthola isaziso ngoba kwathiwa yandisa ukugeleza kwegazi kuya ebuchosheni, umphumela abanye abakholelwa ukuthi ungathuthukisa izimpawu zesifo i-Alzheimer's.
L Ukwehla kwesisindo
Abanye bakunikeze izakhiwo ze-thermogenic, basikisela ukuthi "ingashisa amanoni" noma ithuthukise ukusebenza kokuzivocavoca umzimba.
Imiphumela ibonwe lapho kuhlolisiswa i-vinpocetine njengokuncipha kwesisindo noma isengezo semidlalo.
Ucwaningo olulodwa olushicilelwe ngo-2016, olwenziwa e-University of South Florida ngo-2016, lwabika ukuthi isengezo esishisa amafutha esine-vinpocetine sandisa izinga lokuphumula lomzimba (RMR) kubagijimi abesilisa abayi-10 kodwa abenzanga lutho ukunciphisa amafutha omzimba wabo.
I-Vinpocetine powder 42971-09-5 Ucwaningo oluningi
Uma ithathwa ngomlomo: I-Vinpocetine IPHEPHELEKILE NGOKUPHELELAYO kubantu abaningi uma iphuzwe ngomlomo ngokufanele, isikhathi esifushane. IVinpocetine ingadala imiphumela engemihle okubandakanya ubuhlungu besisu, isicanucanu, ukuphazamiseka kokulala, ikhanda elibuhlungu, isiyezi, uvalo nokuxubha ebusweni.
I-Vinpocetine powder 42971-09-5 Isethenjwa
 UCohen, uPieter A. (Okthoba 2015). "IVinpocetine: Isidakamizwa Esingagunyaziwe Sidayiswa Njengesengezo Sezokudla". Izinqubo zeMayo Clinic. 90 (10): 1455. doi: 10.1016 / j.mayocp.2015.07.008. I-PMID 26434971.
 Uhlelo Lukazwelonke Lwe-Toxicology (Septhemba 2013). “Umbhalo Wokubukeza Ulwazi Lwamakhemikhali weVinpocetine (CAS No. 42971-09-5)” (PDF). UMnyango Wezempilo kanye Nezinsizakalo Zabantu e-US. Ibuyiswe ngoDisemba 28, 2018.
 I-Almada, iBianca (Julayi 6, 2015). "Izimangalo ezingamanga zesengezo sobuchopho zidonsa isigwebo esingu- $ 152 million kuFTC" Ukubhaliswa kwe-Orange County. Ibuyiswe ngoJanuwari 1, 2019.
 UMyers, uSteve (Julayi 8, 2015). "Abathengisi Bememori Bengeze Icala le-FTC ngama- $ 150M". Imikhiqizo Yemvelo Ngaphakathi. Ibuyiswe 1 Januwari 2019.
I-NADH (usawoti we-disodium) (606-68-8)
I-PQQ disodium usawoti wempuphu (122628-50-6)